အနည်းငယ်သောအမြင် - အပိုင်း 2
သိုးမွှေးနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်ဒဏ္myာရီများစွာကြားသိခဲ့ရသည်။ ဥရောပရှိရှေးခေတ်မှ စ၍ မွေးကင်းစကလေးများကိုသိုးမွေးခြေအိတ်များ ၀ တ်ဆင်ရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ခန့်မှန်းရခက်သည်မှာမနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, လူတွေအမြဲဖြစ် ...
21-02-15 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
မိဘအသစ်များသည်အစာကျွေးခြင်းမှအ ၀ တ်လဲခြင်း၊ သို့သော်မည်သည့်အမျိုးအစားကမျှကလေးငယ်များနှင့်အိပ်စက်ခြင်းများထက် ပို၍ မလိုလားသော - သို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်း - အကြံဥာဏ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါ။ သူတို့ကတစ် ဦး စားခွက်သို့မဟုတ် bassinet လိုအပ်ပါသလား? မင်းအိပ်ယာထဲမှာအိပ်ပျော်နေတာလား။ သူတို့ဟာနွေးသို့မဟုတ်အေးမြသို့မဟုတ်စစ်ဝတ်ဆင်ရပါမည် ...
SHEPPSKIN သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသည့်အကြောင်းရင်း ၁၀ ချက်
21-02-06 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုင်ထားကြပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသိုးရေအသားဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့နိုင်သော်လည်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဤပစ္စည်းသည်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိကြောင်းသင်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသလော။ ငါမသိဘူး !! တခြားသူတွေလိုပဲငါဟာနွေးထွေးတဲ့အရာပဲဆိုတာသေချာတယ်။ ကောင်းပြီ ...
ဖိနပ်နှင့်သင် - လက်ျာ Pair ကိုရွေးချယ်ခြင်း
21-01-29 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
ဖိနပ်ရောင်းသည့်မည်သည့်စတိုးဆိုင်ကိုမဆိုလမ်းလျှောက်ပါ၊ ဖိနပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါသင်ရွေးချယ်ရမည့်အရာသည်လုံးဝပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။ ဖိနပ်များသည်ပုံစံမျိုးစုံ၊ အရွယ်အစား၊ အရောင်များနှင့်ပစ္စည်းများအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ အမှန်မှာရာသီနှင့်အချိန်ကာလတစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖိနပ်တစ်မျိုးရှိသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ y လား ...
သင်လေ့လာနေသည့်ကျောင်းသည်ပိတ်ပြီးအိမ်တွင်နေရမည်ဆိုပါကသင်ရရှိနိုင်သောအခမဲ့အချိန်ကိုနှစ်သက်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သို့သော်သင်ယခုအထိလုံလောက်သောအချိန်မရှိသေးပါ။ သို့သော်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုမမေ့ပါနှင့်။ သင်၏လက်များကိုမကြာခဏဆေးကြော။ မထိပါနှင့်။